Inona no ilaina amin'ny menaka manitra chloramphenicol? - BALLYA
Posted on Febroary 17, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe chloramphenicol?
Fanamarihana rehefa mampihatra chloramphenicol
Vokatry ny Chloramphenicol
Zava-mahadomelina matetika ampiasaina
Menaka chloramphenicol dia iray amin'ireo zava-mahadomelina fahita matetika. Chloramphenicol ny antibiotika dia antibiotika misimisy amin'ny elanelam-bahoaka miparitaka any Venezoelà, misy fiatraikany amin'ny bakteria Gram-positive sy bakteria Gram-negatif, Bacteroides anaerobic, Rickettsia, Chlamydia ary mycoplasma, indrindra ho an'ny Salmonella, Influenza bacilli, sns.
Matetika ampiana izy io mba hanomezana sakafo sy hisorohana ny areti-mifindra biby. Ny antibiotika Chloramphenicol dia ahitana ny chloramphenicol, thiamphenicol ary florfenicol. Satria mora ny mitangorona ao amin'ny vatan'ny biby sy ny olombelona, ​​dia mety hiteraka voka-dratsy lehibe izany. Mamoaka poizina kokoa amin'ny olombelona izy io, ary mety hisy aza ny fandrahonana manakana ny fiasan'ny hematopoietika amin'ny tsoka.
BALLYA manome a fitsapana chloramphenicol hilaza aminao raha misy residu chloramphenicol amin'ny vokatra vita amin'ny ronono hohaninao isan'andro.
1. Mampiasa Chloramphenicol
Chloramphenicol antsoina koa hoe chloromycetin. Izy io dia fotsy na somary mavo mavo toy ny fanjaitra, kristaly flake na vovoka kristaly. Milamina sy somary mety levona anaty rano izy io, ka tokony tsy hotehirizina amin'ny rivotra. Chloramphenicol dia antibiotika misy karazany maro. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria sy manakana ny ankamaroan'ny bakteria Gram-positive sy ny ratsy, ary misy fiatraikany sasany amin'ny chlamydia, rickettsia ary ny protozoa sasany.
Ity vokatra ity dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitsaboana salmonellose ary colibacillosis ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona, ary mety kokoa amin'ny fitsaboana ny aretin-kozatra afovoany sy ny aretin-koditra intraocular. Azo ampiasaina izy io mba hisorohana sy hitsaboana ny fivontosana fotsy, tazo paratyphoid, pnemonia, sepsis pneumococcal ary pasteurosis amin'ny biby tanora, ary azo ampiasaina eo an-toerana ihany koa mba hitsaboana mastitis, metritis, keratitis areti-mifindra ary rotika miandry. Ny vahaolana alikaola chloramphenicol 10% dia fanafody mahomby tokoa amin'ny fitsaboana ny biby lo.
Takelaka Chloramphenicol: amin'ny ankapobeny 0.05g, 0.1g, 0.25g na 0.5g isaky ny takelaka. Am-bava fatra chloramphenicol: Akoho 1 0.1g, bitro 1 0.1g, in-3 isan'andro; foal, zanak'omby, ondry, kisoa, alika, saka 10-20 mg 1 kg lanjan'ny vatana, in-2 isan'andro.
Tsindrona: fiomanana vita ankapobeny, 1ml dia misy 0.125g, 2ml misy 0.25g. Subcutane, intramuscular ary intravenous tsindrona chloramphenicol fatra: soavaly, omby 10-20 mg 1 kg lanjan'ny vatana, ondry, kisoa, alika, saka, mink, amboahaolo, sns. 10-30 mg 1 kg lanjan'ny vatana, vorona 50-100 mg / kg lanjan'ny vatana, serfa 30 mg Ny lanjan'ny vatana 1 kg, indroa isan'andro. Rehefa atao ny tsindrona intramuscular dia hita ny necrosis coagulation eo an-toerana izay misy fiatraikany amin'ny fahadiovan'ny fihinanana hena, ary azo esorina amin'ny tsindrona subcutaneaux izany.
Thiamphenicol dia derivative of chloramphenicol. Ny karazany sy ny tanjaky ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny chloramphenicol, fa ny vokany amin'ny ankamaroan'ny Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Enterococcus ary pneumococcus dia malemy kokoa noho ny an'ny chloramphenicol.
Ny Thiamphenicol dia misy fanoherana tanteraka miaraka amin'ny chloramphenicol ary fanoherana ampahany amin'ny tetracyclines. Ny fanesorana am-bava dia haingana sy feno. Haingana dia haingana ny tsindrona amin'ny tsindrona intramuscular. Miparitaka be ao amin'ny vatana izy io ary mivoaka amin'ny urine amin'ny endriny voalohany. Ampiasaina indrindra amin'ny tsinay, ny taovam-pisefoana, ny urinary ary ny hepatobiliary vokatry ny pathogens mora tohina. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny septicemia bakteria, streptococcus, enteritis, ary aretin-koditra mena ateraky ny bakteria Aeromonas hydrophila sy Enteritidis, ary ny aretin-bakteria an'ny biby anaty rano toy ny foza, sokatra, shrimp ary sahona.
Ny takelaka vita dia 25 sy 100 mg avy. Fatra anatiny: 5-10 mg ny lanjan'ny vatana 1 kg ho an'ny biby fiompy sy akoho amam-borona, in-2 ka hatramin'ny 4 misesy. Ny kitapo tsirairay misy vovoka 10 grama vita dia misy akora mahomby 0.5 grama, 50 grama dia misy akora mahomby 2.5 grama, ary 100 grama dia misy akora mahomby 5 grama. Fitantanana ny biby fiompy sy akoho amam-borona (kajy amin'ny thiamphenicol) Dosis: 5-10 mg / kg lanjan'ny vatana. Ho an'ny biby anaty rano, fihinanan-jaza mifangaro (kajy ho vovoka), dia ampiasao 7 grama an'ity vokatra ity isaky ny sakafo 1 kilao, 2 ka hatramin'ny 3 isan'andro, mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 andro.
Florfenicol antsoina koa hoe flufenoxin. Ny zava-mahadomelina dia vovoka kristaly fotsy na fotsy. Tsy misy fofona izany. Izy io dia mety levona kely amin'ny rano sy asidra acetic glacial, mety levona amin'ny methanol, ary mora levona amin'ny dimethylformamide. Florfenicol dia antibiotika misy karazany maro ho an'ny biby fiompy sy akoho amam-borona. Ny fiparitahan'ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny chloramphenicol, ary ny hetsiky ny bakteria dia tsara kokoa noho ny chloramphenicol. Izy io koa dia mandaitra amin'ny fanoherana ny chloramphenicol Escherichia coli, Salmonella ary Klebsiella.
Aorian'ny fitantanana am-bava sy ny tsindrona intramuscular, haingana ny fandraisana azy, malalaka ny fizarana, ary tazomina lava ny fifantohana ra mahomby. Ampiasaina indrindra amin'ny aretina mikraoba amin'ny omby, kisoa, akoho ary trondro, toy ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny mastitis omby, ny pleuropneumonia, ny mavo mavo, ny henan-kisoa, ny colibacillosis ary ny pasteurosis an'ny akoho.
Vovoka 10%: fatra am-bava (isaina ho florfenicol), kisoa sy akoho 20-30 mg lanjan'ny vatana 1 kg, in-droa isan'andro mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 andro; trondro 10-15 mg lanjan'ny vatana 1 kg, indray mandeha isan'andro, mandritra ny 3-5 andro.
Tsy mifanaraka amin'ny alikaola na asidra asidra, toy ny sodium bicarbonate, sira artifisialy ary zava-mahadomelina alkaline hafa, hisorohana ny chloramphenicol tsy ho potika ary ho lasa tsy manan-kery.
Ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina misy asidra sy ny aminotoxins dia mety miteraka rotsakorana, miteraka malabsorption amin'ny tsindrona intramuscular, ary ny fampidirana ny lalan-dra amin'ny tsindrona intravenous, ary koa ny toe-javatra mety hampidi-doza. Ny fanafody asidra mahazatra dia penisilinina, streptomycin, calcium gluconate, hydrochloride procaine sns.
Tsy mifanaraka amin'ny zava-mahadomelina mahery vaika sy mihidy. Ny taninina, kaolin, saribao fanafody sns ... dia afaka manadio ny amomycine sy mampihena ny effetatany.
Aza tsindrona intravena.
Aza mampiasa vola be ho an'ireo zana-kisoa.
Aza omena am-bava an'ireo ruminant efa lehibe.
Aza omena alika be loatra ny alika, satria mora ny miteraka anemia aplastic sy anemia hemolytic.
Ny Chloramphenicol dia mety miteraka fiatraikany ratsy amin'ny rafitry ny hematopoietika olombelona. Ny fampiasana azy ho an'ny ankizy dia mety miteraka tsy fahombiazan'ny tsiranoka, tsy fahampian-dra, ary na dia anemia aplastika aza. Noho izany, raha miseho amin'ny sakafo isan'andro an'ny chloramphenicol ny olona, ​​dia tsy isalasalana fa hitondra fahavoazana lehibe ho antsika izany.
Ny santionany avy amin'ny fanjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina dia mampiseho fa andiany 4 an'ny tantely santionany novokarin'ny mpanamboatra tantely 4, ao anatin'izany ny Henan Baiyi Bee Industry Co., Ltd. no nahitana rongony chloramphenicol voarara.
Tamin'ity indray mitoraka ity, nandritra ny fizahana an-tsokosoko nataon'ny fanjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina, andiam-bokin'ny tantely 52 no nalaina santionana ary ny isan'ny santionany tsy mendrika dia 4 andiany. Ny entana tsy voadio dia ny chloramphenicol. Ny vokatra tantely namboarina tamin'ity indray mitoraka ity dia misy tondro 13 ao anatin'izany ny metaly mavesatra toy ny firaka amin'ny vokatra renitanty, ny residue amin'ny fanafody veterinary toy ny chloramphenicol, ny additives amin'ny sakafo toy ny asidra benzoic sy ny sorbic acid ary ny microbial.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana avy ao amin'ny Shenyang Veterinary Medicine and Feed Supervision Institute, ny zava-mahadomelina veteranina chloramphenicol dia antibiotika iray, ampiasaina indrindra amin'ny tazo typhoid, tazo paratyphoid ary aretina Salmonella sy Bacteroides fragilis hafa. Na izany aza, ny chloramphenicol dia misy fiatraikany ratsy amin'ny rafitry ny hematopoietika olombelona. Raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra dia mety hiteraka fiatraikany ratsy toy ny neuritis optika sy ny tsy fahampian'ny vitamina noho ny tsy fifandanjan'ny zavamaniry. Ary ny fampiasana amin'ny ankizy dia mety miteraka tsy fahombiazan'ny tsiranoka, tsy fahampian-dra, fironana mandeha ra ary aretina matetika, ary koa mitaona anemia aplastic. Ny Chloramphenicol dia antibiotika fambolena efa be mpampiasa taloha, saingy hita fa nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny rafitry ny hematopoietika olombelona io, ary voarara tany Chine hatramin'ny 2002.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny vaovao momba ny fahitana ny chloramphenicol amin'ny tantely dia saika tapaka. Betsaka ny marika fanta-daza tototry ny tantara ratsy. Tamin'ny taona 2013, ny vokatra nataon'ny Guangzhou Conghuarun Zhiyuan Bee Industry Co., Ltd. dia hita fa nisy chloramphenicol; tamin'ny volana oktobra 2014, hita tao amin'ny chloramphenicol ilay tantely voninkazo an-tendrombohitra novokarin'ny Yishouyuan (Beijing) Bee Products Co., Ltd.
Nilaza ny manam-pahaizana avy amin'ny Shenyang Veterinary Institute of Drug and Feed Supervision Institute fa raha te-hanavaka ianao na misy ny vokatra ao amin'ny tantely manana ny fanafody chloramphenicol voarara, dia hanadino foana ianao.
Ankoatr'izay, ny chloramphenicol dia zava-mahadomelina miady amin'ny bakteria, izay misy vokany tsara amin'ny famonoana bakteria anaerobika. Tamin'ny indostrian'ny akoho taloha dia matetika izy io no nampiasaina ho fanafody manokana amin'ny fitsaboana ny pullorum. Ny chloramphenicol iray dia ampiasaina amin'ny akoho, hisy residu fanafody, ary ny chloramphenicol dia hanakana ny fiasan'ny hematopoietic amin'ny vatan'olombelona, ​​izay mahatonga ny olona hijaly amin'ny tsy fahampian-dra. Noho izany, voarara ny fampiasana chloramphenicol ho fanafody fitsaboana biby ho an'ny akoho.
Furazolidone: ny fampiasana maharitra dia mety miteraka aretim-po. Raha tsy ampiharina ny fotoana fisintomana zava-mahadomelina, dia hisy ambiny ao amin'ny atin'ny akoho, ny atin'ny kisoa ary ny akoho. Ny fahasimbana mety hitranga dia ny fiovan'ny fototarazo sy ny karsinogenesis.
Sulfonamides: Ny fampiharana maharitra dia mety miteraka fanapoizinana poizina, ary ny sisa tavela dia mety hanimba ny rafi-dra artifisialy, ka mahatonga hemôtika hemôtika, agranulositosis, thrombositopenia, sns.
Olaquindox: Izy io dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny fiompiana sy ny akoho amam-borona. Noho ny vokany tsara sy ny vidiny ambany dia be mpampiasa ao amin'ny ozin-tsakafo. Saingy izy io dia karazana poizina misy poizina, gonad mutagen, izay mutagenika, teratogenika ary karsinogenika.
Chloramphenicol: Ny fiatraikany ratsy amin'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona dia poizina amin'ny rafitra hematopoietika, mampihena ny platelets sy ny sela ary mamorona neuritis optika. Ny rafitra anzima ao amin'ny atin'ny zanak'osy dia mbola tsy novolavolaina tanteraka, izay misy fiatraikany amin'ny detoxification ny chloramphenicol sy ny fivoahan'ny voa. Ny fiasa dia ambany, ka ny chloramphenicol dia tazonina. Ny loza mety hitranga sisa tavela dia ny chloramphenicol dia misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny taolana hematopoietic, izay mety hiteraka agranulositosis olombelona, ​​anemia aplastika ary anemia hemolitikika, ary misy fiatraikany mahafaty amin'ny olona.
Oxytetracycline: ny fampiasana oxytetracycline mandritra ny fotoana maharitra dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny atiny, mitarika horosia hépatite, miteraka fanapoizinana sy fahafatesana. Raha tsy ampiharina ny vanim-potoana fisintonana, ny sisa dia hiteraka fanoherana ny zava-mahadomelina ny vatan'olombelona, ​​hisy fiantraikany amin'ny fitsaboana antibiotika amin'ny aretin'olombelona, ​​ary hamokatra mora ny fanehoan-kevitra mahazaka olombelona.
Gentamicin Sulfate: mora urate ny fitetezana, fanitarana ny voa, fikorontanana mahazaka ary famoizam-po rehefa ampiasaina amin'ny akoho. Manimba indrindra ny hozatry ny cranial sy ny nerve nerveuse, ary mora ny mamokatra fanoherana fanafody raha ampiasaina matetika.
Antibiotika izay tsy mahazo ampiasaina amin'ny vokatra akoho aondrana: chloramphenicol, gentamicin, thiamphenicol, avermycin, oxytetracycline, tetracyclinesns ... izay mety hiteraka homamiadana avokoa. Misy ihany koa ny sasany toy ny penicillin sy ny streptomycine izay takiana mba hajanona 14 andro alohan'ny famonoana; enrofloxacin sy tylosin dia takiana hajanona 5 andro alohan'ny famonoana; ny salinomycine sy ny streptomycine dia takiana hajanona 3 andro alohan'ny famonoana. Ho fiarovana ny olombelona dia tokony hampiasa antibiotika tsara ny tantsaha tsirairay.
Chloramphenicol dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitsaboana aretina, ary miseho amin'ny endrika menaka chloramphenicol ary latsaka ny chloramphenicol. Menaka chloramphenicol mety amin'ny fampiasana ivelany, ary tsindrona chloramphenicol mety amin'ny fampiasana am-bava sy anatiny. Fa ny chloramphenicol kosa dia misy fiatraikany mafy, noho izany mila mitandrina tsara ianao rehefa mampiasa azy.
NCBI: Fihetseham-po na areti-mifindra: fitsaboana klorophenikaol lohahevitra